Andrimpanjakana : lasa fialokalofana politika ny Antenimierandoholona | NewsMada
Andrimpanjakana : lasa fialokalofana politika ny Antenimierandoholona
Tena hitondra ho amin’ny fahamarinan-toerana sy fitoniana politika ve ny Antenimierandoholona? Misy mahita fa lasa fialokalofana politika…
“Fisokafana amin’ny hery politika sy ny hery velona hafa”, hoy ny sasany, ny amin’ny fanendren’ny filohan’ny Repoblika ireo loholona 21. Nisy minisitra am-perinasa, minisitra teo aloha, mpanao politika, avy amin’ny firaisamonina sivily… “Sarintsarim-pisokafana io”, hoy ny hafa.
Misy lasa lavitra noho izany aza: “Fialokalofan’ny olona efa nahazoazo taona ny Antenimierandoholona”, hoy ny filohan’ny antoko Avana ARD, ny Dr Robinson Jean-Louis, tao amin’ny haino aman-jery tsy miankina iray, afakomaly. Fisotroan-drononon’ny sasany izany, ialokalofana amin’ny hoe “olon-kendry“.
Eo, ohatra, ireo goaika antitra amin’ny politika: na manana traikefa eo amin’ny sehatra misy aza, tsy manaiky ho gisitra amin’ny fitadiavan-tseza. Tsy mamela sehatra ho an’ny tanora ny beantitra toy izany; na tokony ho mpanoro lalana aza, lasa mpitarika ihany na efa tsy afaka firy aza…
Tsy lany olomanga i Madagasikara
Lany olomanga i Madagasikara? Tsy hoe olo-manga fehitenda, araka ny filazan’ny sasany ny ao amin’ny antokom-pitondrana, fa izay olom-baovao hitondra fanovana. Fanambin’izao fitondrana izao rahateo ny hoe fanovana. Misimisy ihany ireo minisitra teo aloha notendrena ho loholona.
Namana akaiky na tsy mahafoy hatramin’ny ela? Tsy hita izay ametrahana azy, na fantatra izao aza fa tsy mahomby teo amin’ny sehatra na toerana nisy azy teo aloha. Izay ilay hoe zary fialokalofan’ny namana sy fisotroan-drononon’ireo beantitra ny Antenimierandoholona amin’izany.
Tena nomen-danja ny fananana traikefa amin’ny toekarena, sosialy, kolontsaina? Eo koa ny tsy fifandanjana ara-paritra amin’ireo notendrena ho loholona. Misy ny mampiaka-peo ny amin’izany. Ao koa ny hoe na iza na iza eo amin’ny fitondrana, mahazo toerana fa tsy azo ialana.
Ahina ny hoe fahamarinan-toerana sy ny fitoniana politika amin’izany. Sao fahamarinan-toerana sy fitonian’ireo beantitra amin’ny politika sy ireo namanamana tsy hita izay anaovana azy ihany ny Antenimierandoholona? Miandrandra izay tena mitondra ho amin’ny fihatsaram-piainany ny vahoaka.